Home Horyaalka Ingiriiska Juventus oo isha ku heysa inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee...
Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay xagaaga u dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea Jorginho .
Sida laga soo xigtay Tuttosport, Bianconeri ayaa isha ku heysa inay xoojiso qadkeeda dhexe ka dib xilli ciyaareed niyad jab leh oo ay sameeyeen xilli ciyaareedkii 2020-21. Kooxda Serie A ka dhisan ayaa durbadiiba bilowday qorsheynta xilli ciyaareedka soo socda, waxayna mudnaanta siinayaan saxiixa kubad sameeyahan. Andrea Pirlo ayaa aaminsan in Jorginho uu noqon karo ninka ku haboon shaqada.
Jorginho ayaa Chelsea kaga soo biiray kooxda Napoli xagaagii 2018 heshiis dhan 50 milyan oo euro. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Talyaani ayaa ku riyaaqay bilowgii cajiibka ahaa ee Stamford Bridge laakiin wuxuu ku guuldareystay inuu ilaaliyo qaab ciyaareedkiisa.
29 jirkaan ayaa ku dhibtooday inuu la qabsado xawaaraha iyo muuqaalka jir ahaaneed ee Premier League waxaana inta badan uu keydka u fadhiyay tababarihii hore ee Chelsea Frank Lampard.
Sikastaba, Jorginho wuxuu xubin muhiim ah ka noqday safka koowaad ee kooxda Chelsea intii uu macalinka u ahaa macalinka cusub ee kooxda Thomas Tuchel wuxuuna ciyaaray 90-ka daqiiqo ee kulankii Blues ay dhawaan Liverpool kaga badisay Anfield
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa qaab ciyaareed fiican ku jira xilli ciyaareedkan, isagoo ka qeyb qaatay shan gool 18 kulan oo uu saftay Premier League. Si kastaba ha ahaatee, waxaa si aad ah loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Juventus bilihii la soo dhaafay, iyadoo wararka ay soo jeedinayaan in Old Lady ay xiiseyneyso waqti dheer.
Jorginho qandaraaska uu haatan kula joogo Chelsea wuxuu ku egyahay xagaaga 2023, sidaas darteed kooxdu waxay dooneysaa inay iska iibiso ciyaaryahanka xagaagan si ay u hesho lacag ku dhow 50 milyan oo ginni oo ay kula soo wareegeen.
Previous article10 rikoor oo uu Lionel Messi dhigi karo Sanadka 2021
Next articleNani oo ka hadlay xaalada Paul Pogba ee Manchester United